विश्वकै चर्चित गायिका, जसको जिन्दगी बलात्कारले बदलिदियो !
एजेन्सी । चर्चित अमेरिकी पप सिंगर लेडी गागाले टीनएजमा आफूमाथि भएको बलात्कारले पूरा जिन्दगी बदलिदिएको खुलासा गरेकी छन् । १९ वर्षको उमेरमा बलात्कारको सिकार भएको खुलासा उनले गत वर्ष नै गरेकी थिइन् । उनले यसबारे भनिन्, ‘म आफूमाथि भएको सो दुर्घटनामा स्वयम् आफू जिम्मेवार रहेको मान्थेँ ।’
उलने अघि भनिन्, ‘मैले ७ वर्षसम्म यसबारे कसैलाई जानकारी दिईनँ । मैले केही सोच्नै सकिरहेकी थिइनँ । म सोच्थेँ, म यसमा आफूलाई कसरी निर्दोष मानुँ, यो मेरो पनि गल्ती हो ।’
बलात्कारले कसरी बदल्यो जिन्दगी ?
गागाले भनिन्, ‘यो दुर्घटनाले मेरो जिन्दगी पूरा बदलिदियो । यसले म मा सारीरिक परिवर्तन आयो । मेरो सोचाई बदलियो ।’ कस्तो सारीरिक परिवर्तन आयो भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘जब तपाईं यस्तो कुनै दुर्घटनाबाट गुज्रिनुहुन्छ, तपाईंलाई तुरुन्तै थाहा हुँदैन कि तपाईंको सरीरमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ।’ सारीरिक र मानसिक परिवर्तनसँगै उनमा सफलताको भोक पनि बढ्दै गयो । चुपचाप त्यसतर्फ केन्द्रित भईन र सफल पनि ।
आफूलाई जिम्मेवार मानेको किन ?
२९ वर्षिय गागाले भनिन्, ‘यसमा मेरो दोष छैन भन्ने कुरा सम्झिनका लागि मलाई वर्षौं लाग्यो । म सोच्थेँ, मैले लगाएको पहिरनले उसलाई रेपका लागि उक्सायो । सोही कारण यो सब हुनुमा मेरो पनि दोष छ भन्ने मेरो बुझाई दियो ।’